News - Baadhista Birta ee Alaabada Cuntada: Amaan iyo shaabadaysan
Baadhista Birta ee Alaabta Cuntada: Amaan iyo shaabadaysan
Nidaamyada ogaanshaha birta waxaa markii ugu horreysay laga soo saaray Ingiriiska 1948, haddana waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha baakadaha cuntada.
Sumcadda sumcaddaadu waa wax kasta oo adduunkan ku xidhan ee aadka u xeel dheer, wax soo saarkiisuna ka buuxo. Maalgelin lagu sameeyo qalabka baakadaha oo soo saaraya xirmooyin aamin ah oo xirmay ayaa sameyn kara farqiga oo dhan. Hal dariiqo oo lagu hubiyo hufnaanta sheygaaga waa inaad ku darto ogaanshaha birta khadka baakadkaaga.
Sidee bay nidaamyada ogaanshaha birtu u shaqeeyaan?
Sida laga soo xigtay Hubinta Tayada & Majaladda Badbaadada Cuntada, dhammaan ujeeddooyinka guud ee ujeeddada biraha aan biraha ahayn waxaa loogu talagalay qaab isku mid ah:
Saddex gariiradda ayaa si sax ah ugu siman silsilad aan bir ahayn.
Gariiradda dhexe waxay kuxirantahay gudbiye raadiye hirarkiisu sarreeyo.
Laba gariiradda gudbinta qaadata ayaa fadhiya labada dhinac ee gariiradda dhexe.
Sababta oo ah labada gariiradda dibeddu waa isku mid oo masaafada saxda ah ee ka fog xarunta, waxay helayaan isla calaamadda oo waxay soo saaraan danab wax soo saar isku mid ah oo dheellitiran.
Marka marka qayb bir ah ay soo dhex marto nidaamka:
Qaybaha isdabajoogga badan ayaa lagu carqaladeeyay hal gariiqa hoostiisa, iyadoo la beddelayo danab isla markaana khalkhal gelinaysa dheelitirka.
Wax soo saarku wuxuu ka baxayaa eber, isagoo soo saaraaya calaamadda digniinta nidaamka jiritaanka biraha.
Iyada oo ku xidhan waxyaabaha gaarka ah ee nidaamka, habka diidmada ayaa guud ahaan la hawlgeliyaa, iyada oo natiijada ugu habboon ee ka saarista boqolkiiba 100 ee birta iyo xaddiga ugu yar ee wax soo saarka iibka ah.
Maxay tahay sababta hawlgalka baakiddu u maalgashan karo ogaanshaha birta?
Ka ilaalinta astaantaada suuqa dhexdiisa waa mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee soo saaruhu sameeyo. Laakiin maalgashiga oo dhan si loo sameeyo sumcad ku saabsan tayada wax soo saarka waa la waayi karaa haddii ay dhacdo in hal nabadgelyo la soo celiyo.
Horumarinta iyo dayactirka barnaamij kormeer wax ku ool ah, oo la xaqiijin karo ayaan ikhtiyaar u ahayn hawl-wadeennada. Ogaanshaha birtu waa hab wax ku ool ah oo aan qaali ahayn oo lagu ilaaliyo macaamiishaada iyo magacaaga. In kasta oo qiimaha, gudbinta iyo tixgelinta kale ee ganacsi ay muhiim yihiin, waxqabadka farsamo waa inuu ahaadaa qodobka koowaad marka la qiimeynayo qalabka baarista biraha si loogu aamino sumcaddaada sumcadda.
Sideen ku xushaa qalabka ogaanshaha birta saxda ah ee deegaanka baakadeyda?
Ka bilow qiimeynta aagga kormeerkaaga. Ma qoyan yahay mise qalalan? Waa maxay kala duwanaanshaha heerkulka? Xulista qalabka baarista birta ee ku habboon deegaankaaga hawlgalka waa muhiim.
Farogelinta biyaha ee qaybaha korantada ayaa ah mid ka mid ah sababaha ugu badan ee keena cillad soo saaraha birta. Haddii geedka uu ku jiro nidaam hoos loo dhaqo, cadaadis sarreeya ama hooseeya ma jiraa? Qiimeynta dhaq-dhaqaaqa IP65 waxay ka dhigan tahay in qalabka birta u adkeysan karo hoos-u-dhaqidda hoose ee biyo heerkulka deegaanka. Qiimeyn IP69K ah macnaheedu waa heerkul sarreeya iyo cadaadis joogto ah. Laakiin iska jir: qiimeyntani caadi ahaan waa la soo sheegay. Sumcadda soo-saaraha ee warshadaha ee awoodda u adkaysiga dhaqista waxay noqon kartaa tilmaan wanaagsan.
Maydhisku ma ku jiraan wakiilada dabka? Hadday sidaas tahay, taxaddar taxaddar leh waa in la siiyaa isku-darka gaarka ah ee birta birta ah ee loo isticmaalo kiiska baaraha birtiisa. Nooca 316L ayaa u adkaysi badan wakiiladan damiir-laawayaasha ah.
Deegaannada qalalan, dhammaadka qalabka baarista biraha ma rinji baa? Ku dhajinta dusha rinjiga durdurka badeecada ayaa aakhirka ku sumoobi kara alaabtaada jajabka rinjiga.
Sidoo kale tixgeli caabbinta saameynta. Daboolka balaastikada ah iyo xuubka waa la xidhayaa ama wax galayaa. Shaashad shaashad adag leh iyo kumbuyuutarka ayaa ka fogaanaya waqtiga dhimista iyo kharashyada beddelka qaybaha
Sidee ayuu xasaasi u yahay habka ogaanshaha birta?
Baahiyaha xasaasiga ah ee ogaanshaha birta badanaa way ku kala duwan yihiin qalliinka. Tusaale ahaan, aaladda biraha baarteeda shaqadeedu ugu horreysa waxay noqon kartaa inuu ilaaliyo gabal qalab muhiim ah, sida sheeter ama xajiyaha. Hadafku wuxuu noqonayaa in laga takhaluso birta weyn ee ku filan in qalabka lagu waxyeeleeyo.
Qeyb kale oo khadka ah, heer xasaasi ah oo ka duwan ayaa loo baahan doonaa si loo baaro socodka badan ee alaabta. Iyo sababta oo ah kormeerka xirmada ugu dambeysa waa inay noqotaa tan ugu baahida badan, xitaa xasaasiyad sare ayaa loo baahan lahaa si loo ilaaliyo badeecadaada ka hor inta aysan gaarin suuqa.
Kooxda xakamaynta tayada warshaddaada waa inay lahaato bartilmaameedyo xasaasi ah oo gaar ah oo loogu talagalay birta, biraha aan lahayn, iyo birta birta ah (nooca 316) wasakhda hawlgal kasta oo kormeer ah. Bartilmaameedyadan waa in lala socodsiiyaa soo saaraha birta soo saaraha si ay u doortaan qalabka ku habboon dalab kasta. Hubso inaad dejiso yoolal macquul ah oo la gaari karo.
Sida loo bilaabo biraha lagu ogaanayo baakadaha cuntada
GAOGE waxay leedahay waayo-aragnimo sannado badan hirgelinta nidaamyada xirmooyinka cuntada ee isku-dhafan oo isku dhafan oo lagu ogaado birta.
Baadhayaasha Birta ayaa waxtar u leh baaritaanka walxaha birta ah iyo kuwa aan birta ahayn ee ku jira xirmooyinka alaabada la dhammeeyay, waxaa si ballaaran loogu dabaqay cuntooyinka, alaabada carruurtu ku ciyaarto, daawooyinka, dharka iyo warshadaha kale.
Friendly Nidaamka xakamaynta shaashadda taabashada ee saaxiibtinimada leh
● Si otomaatig ah loo ogaado xaaladda shaqada, oo ku habboon dayactirka
Dhamaan Qaabdhismeedka Birta ahama oo si nadiif ah u nadiifi.
● U hoggaansanaanta heerka GMP iyo HACCP
Mechanism Farsamada otomaatiga ah iyo qalabka digniinta tooska u istaaga waa ikhtiyaari
Farsamaynta dhijitaalka ah si loo helo signal leh microcomputer sare si loo wanaajiyo saxnaanta ogaanshaha.
Ens Dareenka ayaa si xor ah oo fudud loo hagaajin karaa
Supp Xakamaynta xoog leh ee wax soo saarka badeecooyinka cuntada biyaha ku jira, cuntooyinka barafaysan & cunnooyinka la shiilay